စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။!
စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 10:15 စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။. on September 22
Today isasunny day, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, more than 100 guests from Zhongshan City and Henglan Town, leaders of Domy group, financial media and many partners attended the ceremony to witness the event!
Zhongshan အိမ်များဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီ, Ltd. စက်မှုဇုန်အသစ်
စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။!စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 10:15 စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။. စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 1995. စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 24 စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။. စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။, စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။. စက်မှုဇုန်သစ် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနားကို ရွှေရောင်နေ့နဲ့ ရွှေနာရီမှာ လေးနက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။